Garsoore mar kale Joojiyey Xayiraadii Madaxweyne Donald Trump ee Muslimiinta | SAHAN ONLINE
Garsoore mar kale Joojiyey Xayiraadii Madaxweyne Donald Trump ee Muslimiinta
HAWAI – Xaakimkan oo here federal ah kana shaqeeya gobolka Hawaii ayaa si kumeel gaar ah u joojiyey xayiraadii uu madaxweyne Donald Trump saaray dadka ka yimaada 6 dal oo muslimiin ah.
Wareegtadan oo ay u gudbiyeen Maxkamadooda Federaaliga ah ayey ku sheegeen in ay tahay mid dhaawacaysa dad badan oo ay kamid yihiin ardayda Jaamacadaha ka dhigta gobolkooda,taasoo uu ku raacay garsooraha maxkamadda federaalka ee Hawai.
Madaxweyne Donald Trump ayaa wareegtadiisii hore wax kasoo baddelay kadib markii maxkamada dalkaas horey u laaleen xayiraadii socdaalka uu saaray muwaadiniinta 7 dal oo ay Soomaaliya ku jirto oo loo diiday in ay imaan karaan dalka Maraykanka.
Madaxtooyada dalkaas ayaa wareegtada labaad wax kasoo badeshay iyadoona ka saartay liiska dalalka la xayiray dalka Ciraaq ,sidoo kale waxay ku sheegeen in xayiraadan ay saameynayn dadka horay loo siiyey VISA ama dal ku jooga Green Cardka.
Wareegtada 2aad ee Trump ayaa lagu waday in maanta oo khamiis ah 16-ka Maarso ay dhaqan gasho balse saacado ka hor wareegtadan ayaa waxa joojiyey Garsoore ku sugar Hawaii oo sheegay iney tahay mid sharci-daro ah.
Arrintan ayaa noqoneysa waji gabaxii labaad uu la kulmo Donald Trump gaar ahaana maxkamadaha Maraykanka oo horay sidan oo kale u fashiliyey xayiraadii uu soo rogay madaxweynuhu.
Madaxweyne Donald Trump oo si adag uga hadlay go’aanka kasoo baxay maxkamadda Hawai ayaa ku tilmaamay mid salka ku haysa arrimo Siyaasadeed.
Balse Maxkamadda Hawaii ay ku doodaysa in wareegtadan iyo xayiraada ay tahay mid si gaar ah loogu saleeyey diinta Islaamka oo muslimiinta si gaar ah loola beegsanayo taasoo kasoo horjeeda Dastuurka Maraykanka.
Xukuumadda ayaa lagu wadaa iney rafcaan ka qaadato mar kale walow laalidii wareegtadii hore ay sidan oo kale rafcaan uga qaateen kuna guuleysan waayeen.